Yiziphi izinzuzo zeSitifiketi se-Certified Hacker (CEH) esiqinisekisiwe
Izinzuzo ze-CEH certification
Thuthukisa ukuqonda kwakho ngezingozi kanye nokukhubazeka
Bonisa ukuthi ungayithola kanjani inqubo yokucabanga ye-hacker
Akuyona kuphela eyigugu kubahloli bokungena
Khuphula umholo wakho nge-CEH Certification
Phakamisa Umsebenzi Wakho
Uzobona ukuthi ungasebenzisa kanjani amathuluzi wangempela wokuqapha
Indlela ephumelela kakhulu ukuthola isitifiketi sakho se-CEH esheshayo
Yiba Hacker Ethical Certified ezinsukwini ezingu-Just 5
Ngonyaka odlule iwebhusayithi evelele yobuchwepheshe bezindaba, i-Beta News, ikhulume ngokuthi izingxenye zokuqhaqhaza ezokuziphatha ziphakathi kwezinto ezingcono kakhulu zokuphepha kwe-cyber. Lesi sihloko sichaze ukuma phakathi kwezitifiketi zokuhlola zokungena ezivame kakhulu, i-Certified Ethical Hacker (CEH).
I-CEH yiyona isitifiketi esiyinhloko sokuletha inqubo "yokumnyama" yokuqapha inhlangano ejwayelekile yababukeli bezobuchwepheshe be-IT; ukunikeza ukufunda okulindeleke ukuba kulindeleke ngokusemthethweni futhi kusebenze ezindleleni zobugebengu ze-cyber.
Ngenxa yokuthandwa kwalesi sitifiketi, inani elikhulu labachwepheshe emhlabeni wonke lihlela ukulifeza. Uma ngabe ucabanga nge-CEH, uzodinga ukwazi izinzuzo ngaphambilini ozinikeze ithuba lakho kanye nokheshi.
Lezi yizo izinzuzo ze-CEH isitifiketi:
I-CEH izosekela isinxephezelo sakho
Vela umsebenzi wakho wokuphepha
Kulesi sihloko sizocacisa zonke zezizathu. Funda phambili ukuze ngaphakathi nangaphandle uthathe i-gander ukuthi kungani kufanele ufeze isitifiketi. Ziyini izinzuzo ze-CEH?
Izigebengu ze-Cyber ​​zingamaphayona futhi zizoqhubeka zithola izindlela ezingcono zokuhlasela ingqalasizinda ye-IT nokuxhaphaza.
Ngaphandle kolwazi lwezingozi kanye nokukhubazeka okuhlobene namafolda akho we-PC, uzoba nesikhathi esibucayi ukubenza bavikeleke.
Ngokugxila ekuhlolweni kwe-CEH, uzobona ukuthi abaduni bahlola kanjani uhlelo lwakho lokunquma uma unenhloso yokuhlaselwa. Amamojula ayisisekelo ngaphakathi kwe-CEH azokukhombisa le nqubo, ngakho-ke ungasebenzisa ulwazi ebhizinisini lakho:
I-Module 1: Isingeniso ekuqashweni kokuziphatha
I-Module 2: Ukunyathelisa kanye nokuQaphela
I-Module 3: Iskena Amanethiwekhi
I-Module 4: Ukukhokha
Lezi zindawo ziphelele futhi zakha isisekelo esiqinile sokubona ukuthi ukukhubazeka kuthinta kanjani izinhlangano eziqhamuka kwansuku zonke.
Ukufeza le Isiqinisekiso se-CEH unikeza "i-white cap" i-IT ochwepheshe ngokuqonda embonweni wesigebengu se-cyber.
Ngenkathi ukulwa nokulwa nezigebengu ze-cyber ngokuthembekile kuhlanganisa ukuphendula ezingozini kanye nezikhathi njengoba kwenzeka, kubaluleke kakhulu ukubona ukuthi lezi zigebengu ziqondisa kanjani ukuhlaselwa kwabo namasu okuthola imininingwane.
Ngokuqaphela ukuthi ungayisebenzisa kanjani inqubo yokucabangela yomshoshaphansi, uzoba namandla okuthola isu elisebenzayo, ubheke ngaphezulu kwamasu akho namasu okuphepha okwamanje ukuze uthole amaphuzu angase angabi nasizo ngokumelene nezigebengu ze-cyber.
The Isiqinisekiso se-CEH akukhona kuphela abahloli bokungena. Lesi sitifikedi esifanelekayo sibuye siphelele ngokuphepha kwe-IT kanye nochwepheshe bezinhlelo.
Uma ngabe unamakhono okuphatha izinhlelo, unayo i-gauge ephelele yokuhlangana nokufunda kwakho kokuphepha kwe-cyber ne-CEH. Ukufunda kwangempela kwamanje okwenziwe nge-CEH kuyoba okuphelele kuwe neqembu lakho ukuvikela uhlelo lwakho olubhekene nezigebengu ze-cyber.
Ngempela, ngisho nabaqeqeshiwe bezokuphepha be-IT bazothola isikhuthazo ekufezeni i-CEH. Uma kungenzeka ukuthi uthathe isitifikedi se-state esingavamile, esifana ne (ISC) se-CISSP ye-2, i-CEH izoqoqa imininingwane yakho yokuphepha yesistimu ye-commonsense - ephelele uma ihlangene ne-hypothesis kanye nezindlela zokuphatha ezisebenzayo ku-CISSP.
Ukufeza isitifiketi esibhekwa embonini kuyisimo sokungabonakali samakhono akho futhi singabonakala ngenkathi sishintsha ekuqedeni izingxenye ezintsha.
Ukukhokhelwa okujwayelekile kwabaqeqeshiwe nge-CEH isitifiketi yi-£ 55,000, njengoba kuboniswe ngolwazi oluvela ku-ITJobsWatch. Lokhu kunyuselwa ku-£ 67,500 ne-£ 87,000 yokuhlolwa kwePenetration kanye nezingxenye eziphezulu zokuhlolwa kwePenetration ngamunye.
Isithombe esingaphansi kwesithombe sibonisa ukukhokhela okujwayelekile kwezifundiswa eziqinisekisiwe ze-CEH, ukuphoqeleka kwe-ITJobsWatch.
Ngethuba elilodwa lokuthi usanda kuthatha ukuqina okuqinile ku-IT futhi ufunde ukuthi amanethiwekhi asebenze kanjani phakathi kwezinhlangano (kungenzeka ukuthi ufezile ukuqinisekiswa kwe-A + neNethiwekhi + ye-CompTIA) - i-CEH ingakunika indlela yokukhulisa ukuqonda kwakho ukuphepha kwe-IT.
Uma kungenzeka ukuthi ukhona kule ndawo futhi udinga ukungena engxenyeni ekhokhela ukuphepha kwe-cyber, cabanga ngokufeza i-CEH eseduze ne-Certification ye-CompTIA's Security +. I-CEH izokwenza ukuqonda kwakho ngamathuluzi nezinhlelo ezisetshenziselwa abaduni, kanti i-Security + izokunikeza isisekelo sokufunda kwezokuphepha kwe-IT.
Ngenkathi ungase uphenye ngokucophelela amathuluzi okuqapha ukuze uhlakulele isipiliyoni sakho (noma ukufeza ilukuluku lakho), akunakwenzeka ukuthi ufundiswe ngaphakathi nangaphandle kokufunda okudingeka ukuthi usebenzise futhi uwaqonde la mathuluzi.
Kunoma yikuphi, nge-CEH uzothola ukuthi ungasebenzisa kanjani amathuluzi ngokwabo - izifundo zokuziphatha zokuziphatha ngokusemthethweni zizofaka ukufinyelela kuma-lab wangempela we-140 nangaphezulu kwamathuluzi wokuqapha i-2,200.
Ukuqaphela ukuthi abahlaseli abanokuziphendulela basebenzisa amathuluzi ahlukene bakwenza kanjani ukuthi uvikele kangcono amanethiwekhi, izinhlelo zokusebenza, nezinsiza ezahlukene.
Lungiselela nge-Innovative Technology Solutions esimweni sokuphuthumayo sokuziphatha okusheshayo futhi uzothola ukuqinisekiswa ezinsukwini ezingu-5 kuphela.
CEH v10 Yini okusha? Isiqinisekiso se-Ethical Hacker Certified v10 Sibikiwe